के दिने गिफ्ट आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकालाई ? - E Net Nepal
Home Guest Column Love Special Valentine's Day के दिने गिफ्ट आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकालाई ?
के दिने गिफ्ट आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकालाई ?
E NET NEPAL 2:30 AM Guest Column, Love, Special, Valentine's Day,
भ्यालेन्टाइन डेमा प्रेमको प्रतीक रातो गुलाफलाई अनिवार्य गिफ्टका रूपमा लिइन्छ। यसका साथै आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकाबाट थप माया पाउन र भ्यालेन्टाइन डेलाई थप रोमाञ्चक र अविस्मरणीय बनाउन रातो गुलाफ अनिवार्य मानिन्छ। त्यसो त भ्यालेन्टाइन डेमा रातो गुलाफ आदानप्रदान गर्नु संस्कृति नै बनिसकेको छ। आकर्षक डिजाइनमा सजाइएको रातो गुलाफ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइ फ्रेन्डलाई दिंदा आपसी सम्बन्धको रोमाञ्चकतामा सुगन्ध थपिनेछ।
बजारमा आएका नयाँ मोडलका विभिन्न ग्याजेटहरू पनि गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। किनभने पार्टनरले उक्त ग्याजेटको आवश्यकता महसुस गरिरहेका हुनसक्छन्। मोबाइल, आइफोन, आइपड, ट्याब्लेटजस्ता ग्याजेट्सहरू गिफ्टका रूपमा दिंदा लामो समय पनि टिक्ने हुनाले उनलाई सधैं आफ्नो सम्झना रहनेछ।
भ्यालेन्टाइन डेमा आफ्नो हितैषीलाई मनपर्ने पोसाक गिफ्टका रूपमा दिने चलन छ। फेसनेबल ड्रेसलाई गिफ्टका रूपमा दिँदा प्रेयसीको मनमा उमंग छाउँछ, तर यस्तो ड्रेस किन्नुपूर्व प्रेयसीको भावना भने बुझ्नुपर्छ। उनलाई कुन रङ, डिजाइन तथा साइज मन पर्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेर मात्र सामान खरिद गर्नुपर्छ, अन्यथा प्रेयसीको आफूप्रति हेर्ने नजरनै फरक पर्न सक्छ। भ्यालेन्टाइन गिफ्टका रूपमा पहिरन किन्दा त्यसले प्रेमको भाव झल्काएको हुनुपर्छ। गिफ्ट दिंदा सकेसम्म सरप्राइजका रूपमा दिन सक्नुपर्छ जसले दुवैको मनमा माया बढाउनेछ।
हाम्रो साथमा सधैं रहिरहने केही कुरामध्ये मुख्य कुरा हो- वालेट। मोबाइल बरु कहिलेकाहीं छुट्न सक्छ तर वालेट प्रायः साथमै हुन्छ। घरबाहिर जाँदा मात्र होइन, घरभित्रै पनि हामीसँगै टासिएर बस्छ यो। त्यसकारण वालेट पनि गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसलाई गिफ्टका रूपमा दिंदा दुवैको सम्झना नजिक रहन्छ। वालेट आकर्षक डिजाइन र चिटिक्क परेको हुनुपर्छ। सस्तो भए पनि राम्रो र प्रयोग गर्न सजिलो वालेट छनौट गर्नुपर्छ। वालेट अत्यावश्यक मात्र नभै शौख पनि भएको हुँदा ब्रान्डेड वालेट गिफ्ट दिनु उत्तम हुन्छ।
ब्रासलेट र घडी
विभिन्न प्रकारले बनाइएका ब्रासलेट तथा घडीहरू पनि गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। विभिन्न गहनाबाट बनाइएका ब्रान्डेड ब्रासलेट र घडी खरिद गर्दा त्यसको डिजाइनमा भने ध्यान पुर्या।उनुपर्छ। घडी गिफ्ट दिनुको सांकेतिक अर्थ हुन्छ- समयको ख्याल राख्नु। समयको पालना एवं ठीक टाइममा ठिक डिसिजनमा पनि यसको महत्व हुन्छ। ब्रासलेट किन्दा औकातअनुसार डिजाइन, आकार र मात्रा छनौट गर्नुपर्छ, जुनसुकै गिफ्ट किन्दा पनि प्रेयसीको मनोभाव बुझ्न सक्नुपर्छ।
प्रविधिको विकास भए पनि तस्बिरलाई एल्बममा सुरक्षित राख्ने चलन हराइसकेको छैन। त्यसैले आफूहरूको स्पेसल मुभमेन्टको संकलनका लागि पनि फोटो एल्बम अत्यावश्यक छ। तस्बिरहरू संग्रह गरी आफूहरूको विगत सम्झेरै रमाउन र एक-अर्काको माया अभिवृद्धिका लागि फोटो एल्बमलाई पनि गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। यसरी संग्रह गरिएका तस्बिरहरू हेर्दा आफूहरूको सम्वन्ध बुझ्न र निकटता बढाउन उत्प्रेरणा मिल्नेछ। फोटोबुकमा आफ्ना स्पेसल मुभमेन्टका तस्बिरहरू राखेर गिफ्ट दिन सके अझ राम्रो हुन्छ। किनभने ती तस्बिरहरू हेरेर पार्टनर विगतको रोमान्समा हराउनेछन् र आफूप्रतिको दृष्टि थप सकारात्मक हुनेछ।
फेब्रिट टिनएजर्स पुस्तक
आफ्ना गर्लफ्रेन्ड/ब्वाइफ्रेन्ड अध्ययनका पारखी छन् भने पुस्तक पनि गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ। पुस्तक गिफ्ट दिनुपूर्व उसको चाहनालाई भने बुझ्नु पर्छ। साहित्य, प्रविधि, अर्थतन्त्र, विज्ञान, खेलकुद, इतिहास, सामाजिक जस्ता कुन विषमा रुचि छ सोही अनुसारको पुस्तक गिफ्ट दिन सकिन्छ। भ्यालेन्टाइन बढीजसो टिनएजरले मनाउने भएकाले टिन्स समस्या र समाधानसँग सम्बन्धित पुस्तकहरू उपहार दिन सकिन्छ। यसले पार्टनरको शैक्षिक स्तर वृद्धि हुनुका साथै हरपल तपाईंको सम्झना दिलाइरहनेछ। पुस्तकभित्रका हरेक गतिविधिसँगै आफ्नो मुहार पनि झल्किनेछ।
खेल मानवजीवनको अभिन्न पाटो हो। त्यस कारण यसबाट कोही पनि अछुतो हुन सक्दैन। आफ्नो पार्टनरको रुचि कुन खेलमा छ सोही अनुसारको सामग्रीलाई आफ्नो गिफ्ट आइटममा समावेश गर्न सकिन्छ।
भ्यालेन्टाइन डेमा आफ्नो प्रेमी/प्रेमिकालाई दिइने गिफ्टमा यो बढी उपयुक्त हुन्छ। आफ्नो व्यक्तिगत भावना, घटना र यथार्थलाई उतारेर तयार पारिएको डायरी गिफ्ट दिंदा उसलाई आफ्नो विगत, वर्तमान र यथार्थता बुझ्न सजिलो हुन्छ। यस्तो डायरी तयार पार्दा निजी भावनासँगै प्रेमीसँगको भेटपछिका तीतामीठा क्षण एवं रोमान्टिक पलहरू समेट्नुपर्छ। यसको अध्ययन गर्दा त्यो क्षणमा डुबुल्की मारेको आभास होस्। यसमा कविता, भावना, गजल, सायरी, मुक्तकजस्ता कुरा पनि छुटाउनु हुँदैन। सफा अक्षरमा चिटिक्क पारेर लेखिएका यस्ता नोटले आफ्नो हितैषीको मन जित्न सघाउ पुग्छ। यस्तो डायरीलाई जीवनीजस्तो भने बनाउनु हुँदैन।
डायरी तयार पार्दा शब्दहरूको प्रयोगमा विशेष ध्यान पुर्या उनुपर्छ। भद्दा र भारी साहित्यिक नभएर सरल, आकर्षक, प्रेमप्रतीक र मायालु शब्दहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यदि पुराना प्रेमी/प्रेमिका भए विगतमा आफूहरूले भोगेको रोमाञ्चक क्षण, भ्रमण आदि कुरालाई सरल एवं आकर्षक शैलीमा उतार्नुपर्छ। यसले आपसी सम्बन्धमा देखिएका केही खटपटीमा औषधीको काम गर्छ। यदि नयाँ जोडी हो भने आकर्षक र लोभलाग्दो शैलीमा लभलेटर लेख्न सकिन्छ। पहिलोपल्ट प्रेमप्रस्ताव राख्ने हो भने यो अझ उत्तम माध्यम बन्न सक्छ। फेसबुक, मोबाइल र इमेलभन्दा लभलेटरप्रतिको विश्वास अझ बढी हुन्छ। त्यस कारण पनि पर्सनल डायरी भ्यालेन्टाइनक डेको गतिलो गिफ्ट बन्न सक्छ। त्यसबाहेक हाम्रो दैनिकी जीवनको प्रयोगमा आउने अन्य थुप्रै कुरालाई गिफ्टका रूपमा प्रदान गर्न सकिन्छ।
By E NET NEPAL at 2:30 AM
Raj Bahadur Shah March 30, 2013 at 6:32 PM